राजनीति Archives - Page2of 476 - Naya Pusta
भीमदत्त नगरपालिकामा उप-राष्ट्रपति पुनलाई अभिनन्दन
Naya Pusta २०७५ फाल्गुन १ प्रदेश नम्बर ७, राजनीति
महेन्द्रनगर । उप राष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनलाई अभिनन्दन गरिएको छ । बेदकोट धार्मिक महोत्सव उद्घाटनका लागि कञ्चनपुर आएका उप राष्ट्रपति पुनलाई भीमदत्त नगरपालिकामा अभिन्दन गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले वडा नं. १३ झोलुङ्गे पुलमा स्वागत तथा अभिनन्दन कार्यक्तम गरी सबै नगरवासीका तर्फबाट उप राष्ट्रपति पुनलाई अभिनन्दन गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख
धुम्बाराहीमा जनयुक्त दिवस मनाईयो, वामदेवदेखि को को पुगे ?
Naya Pusta २०७५ फाल्गुन १ Special News, राजनीति
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको दिनको आज स्मरण गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिन अर्थात् फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको थियो। तर, तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन एमालेबीच पार्टी एकीकरण भएपछि यो दिनलाई जनयुद्ध
Naya Pusta २०७५ माघ २९ राजनीति
काठमाडौं । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोप खेपेका नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का साढे २ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका छन् । खड्कासँग विशेष अदालतले साढे २ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको हो । मङ्गलबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका खड्कासँग अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरू प्रमोदकुमार श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले
Naya Pusta २०७५ माघ २९ February 12, 2019 Samachar, Special News, राजनीति
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवकी बुहारीको उपचारका क्रममा निधन भएको छ । भक्तपुरमा रहेको क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत यादवकी बुहारी मनिषाको मंगलबार निधन भएको हो। दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा डेढ वर्षसम्म उपचार गराउँदा पनि ठिक नभएपछि मनिषालाई आठ महिना अघि नेपाल ल्याइएको थियो। त्यहाँका डाक्टरले मनिषा लामो समयसम्म
नेकपाका नेतालाई राजपाका नेताले स्टुडियो मै दिए यस्तो चुनौति (भिडियोसहित)
Naya Pusta २०७५ माघ २९ February 12, 2019 राजनीति
काठमाण्डौ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । यस अवधिमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्र्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । ३३ किलो सुन, यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण र निर्मला हत्याकाण्डले सरकारलाई असफलको पगरी लगाइदिएको छ । सरकारले गर्न नसकेका कामको चर्चा गरेर
नेविसंघ अध्यक्ष महरले देउवासामु बुझाए राजीनामा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले राजीनामा दिएका छन् । कार्यसमितिको म्यान सकिएको झण्डै ६ महिनासम्म पनि महाधिवेशन गराउन नसकेपछि अध्यक्ष महरले सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष राजीनामा दिएका हुन् । कार्यसमितिको बैठकबाट यो कार्यसमितिको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पार्टी
Naya Pusta २०७५ माघ २७ Special News, राजनीति, समाज
काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्रीपञ्चमी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाईएको छ। वसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा गरे विद्या बुद्धि बढ्ने विश्वास रहेको छ । आज देशभरका सरस्वती मन्दिरमा पूजा आराधना गर्न श्रद्धालुको भीड लागेको थियो। विद्यालय नपठाइएका साना बालबालिकालाई
Naya Pusta २०७५ माघ २७ Samachar, राजनीति
काठमाडौ । नेपाली सेनाका एकजना जवान अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका-२६ स्थित सगरमाथा गेस्ट हाउसबाट खैरो हेरोइनसहित नेपाली सेनाका जवान एकेन्द्र शाही र कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका-६ घर भएका कृष्ण भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो । २३ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेपछि कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका-१
Naya Pusta २०७५ माघ २६ February 9, 2019 प्रदेश नम्बर ४, राजनीति
तनहुँ, गण्डकी । काठमाडौँबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको माईक्रो तनहुँमा दुर्घटना हुँदा २० जना घाइते भएका छन् । माइक्रो स्कार्पियोसँग ठक्कर खाएको प्रहरी प्रहरीले जनाएको छ । बिहीवार तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका ३ धएरेमा बा ३ ख १०५९ नम्बरको माइक्रो ग १ य १०४८ नम्बरको स्कार्पियोसँग ठक्कर खाएको हो । दुवै सवारीका चालकसहित २०
भाषण सकिएलगत्तै अचेत भएका फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्षको निधन
Naya Pusta २०७५ माघ २६ February 9, 2019 Special News, राजनीति
काठमाडौँ । पाँचथरस्थित फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्बाङको शनिबार निधन भएको छ। गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेम्बाङले भाषण गरेका थिए । भाषण सकिएलगत्तै उनी ढलेका थिए। जनप्रतिनिधिका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी नेम्बाङले मन्तव्य राखेका थिए। तर, मन्तव्य सकिनेवित्तिकै आफ्नो सिटमा बस्न नपाउँदै उनी अचेत भइ ढलेका थिए। अचेत